Thelọ ọrụ ntụrụndụ na-etolite usoro ọhụụ iji mejupụta coffers nke ndị na - eme ihe ngosi - Musik Universe - EGO EGO
Industrylọ ọrụ ntụrụndụ na-emepụta aghụghọ ọhụrụ iji gbapụta ndị na-akwalite ihe ngosi - Musik Universe
Ndị na-akwado ihe ngosi a na-egwuri egwu na nnukwu amphitheatres amụbawo na ọnwa ndị na-adịbeghị anya ọnụahịa oche dị na nsọtụ nke warawara n'ọnụ ụlọ ụfọdụ. Nke a bụ ikpe karịsịa maka ndị Fans nke Megadeth ndị ga-azụta tiketi ha maka egwuregwu ndị na-abịanụ na Laval na Quebec City na-esote Ọktọba: oche ndị a ga-efu $ 20, na mgbe ụfọdụ ọzọ.
Otu isiokwu bipụtara na Journal de Montreal n'izu a na-ekpughe na site na nyochaa data banyere ire nke ihe ngosi ha, ndị na-akwalite kwuru na oche na njedebe nke ahịrị ndị ahụ na-efe ngwa ngwa karịa ndị ọzọ. Dabere na ozi enwetara, ndị na-akwalite ihe ngosi Megadeth abụghị naanị ndị na-enweta ego site na "ihe ùgwù" ndị a na-enye na ihe nkiri ndị a: egwu na-abịanụ nke Nwa igodo, slipknot et Journey rekwaa ihe a na akpo "onyinye aisle".
Ticketmaster si online tiketi ọfịs na-akpọsa ngwugwu dị ka ndị a: “Họrọ site na nke kacha mma wara wara oche dị na-enwe mma nke mfe nnweta ihe oriri, ụlọ mposi na ụzọ ọpụpụ na saịtị. "
Maka ihe nkiri " Uzo esi aga na họtelu ", Na slipknot, Tobọchị A Ga-echeta, N'okpuru et Koodu oroma (Bell Center, June 5, 2020), oche mbu ụzọ abụọ dị na ngalaba 100 na-ere maka $ 139,50, ebe tiketi maka etiti oche bụ $ 118,50.
Dabere na ndị na-akwalite ụlọ ọrụ ntụrụndụ, ụdị onyinye a ga-enweta ewu ewu n'afọ ndị na-abịanụ.
(nseta ihuenyo site na saịtị Ticketmaster)
Isiokwu a pụtara na mbụ http://www.musikuniverse.mu/nouvelles/item/12099-l-industrie-du-spectacle-developpe-une-nouvelle-astuce-pour-renflouer-les-coffres-des-promoteurs-de-spectacle
Ikwu nmeko na-abawanye oria cancer ezughi oke ma o bu nye aka
Akụkọ akụkọ banyere ịlaghachite onye agha na-abụghị eziokwu